မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - gomymobi.com
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အကန့်အသတ်မဲ့ bandwidth ရှိနိုင်ပါသလား။
Custom domain နှင့် SSL ကိုသုံးလို့ရလား။
မဟုတ်ပါ။ လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်တို့ SSL ကိုမထောက်ခံသော်လည်းမကြာမီပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့! သင်၏ကိုယ်ပိုင် SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ၀ ယ်ပြီးသင်စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းအတွက်သာသုံးပါ။
ဝဘ်စာမျက်နှာများသို့ element အသစ်များထပ်ထည့်လို့ရပါသလား။
စိတ်မကောင်းပေမယ့်မဟုတ်ပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူအများကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပါ ၀ င်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာများနှင့်စီးပွားရေးစီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖန်တီးရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်ပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစတင်တည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာတွေကိုလှပအောင်လုပ်ဖို့ element တွေကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ အချိန်သိပ်မရှိရင်ရှုပ်ထွေးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့! ယခုအခါသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်သော Element Builder ဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအစမှစတင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့! ဖန်တီးထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကိုယ်ပိုင် domains / sub-domains များသို့မဟုတ် FTP မှတစ်ဆင့်တင်ခြင်းအပြင်၊ အပြည့်အဝဖန်တီးထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကူးယူရန်လည်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ anwser သည်ဟုတ်ကဲ့! သင်၏ထူးခြားသောအခင်းအကျင်းကိုတင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့နောက်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်သာအသုံးပြုရန်သီးသန့်ထားရှိရန်လိုလိမ့်မည်။
သင်စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းကို Editing Mode တွင်သာညွှန်ပြနိုင်သည်၊ သင်၏ထုံးစံဒိုမိန်းထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်၊ သင်သည်ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူသို့သွားပြီး CNAME စံချိန်ကိုဖန်တီးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုမိန်းကိုညွှန်ပြရမည်။ www.gomymobi.com
မဟုတ်ပါ၊ ဤဖြေရှင်းချက်ကိုမဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်မဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အလယ်အလတ်ကဲ့သို့သောပြင်ပဘလော့ဂ်ရေးသည့်စနစ်ကိုသုံးပါ၊ ထို့နောက်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်စတိုးတွင်ဘလော့ဂ်လင့်ခ်ထည့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့! ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသင်၏စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုမိန်းခွဲများကိုသာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင့်မှာစိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ သင့်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စတိုးဆိုင်များကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်အရာအားလုံးဟာမထိခိုက်စေဘဲဆုံးရှုံးခြင်းမရှိပဲစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သေချာတာပေါ့! သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာသို့အခမဲ့ရောင်းချရန်သင်နှင့်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ သို့သော်အရင်းအမြစ်များကိုကန့်သတ်ထားသဖြင့်သင့်တွင်အခမဲ့အကောင့်ရှိသောကုန်ပစ္စည်း ၁၀ ခုသာရှိသည်။
ကျွန်ုပ် website တွင်တစ်ခုခုရောင်းလို့ရပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့! ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးသောအခါ၊ သင့်တွင်စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ရုံသာသင်ပိုင်ဆိုင်သမျှကိုစတင်ရောင်းချရန်လိုအပ်သည်။
Shop သည် domain ၏ sub folder တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် domain ကိုတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အမှာစာများအောင်မြင်စွာပြီးနောက်၊ သင့်အားမကြာသေးမီကဖန်တီးထားသည့်အမိန့်ကိုငွေပေးချေရန်နှင့်သင်စာရင်းသို့ပြန်ပို့ပါလိမ့်မည်။ သင်ဤ link ကိုလည်းသင်၏အီးမေးလ်ပေးသူများထံသို့ပေးပို့သောအီးမေးလ်တွင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။
အယ်ဒီတာများသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်ကုဒ်များမှတစ်ဆင့်မပြောင်းလဲနိုင်သောအထူးဒြပ်စင်များအတွက်၊ သင်ဆောင်ပုဒ်ကို theme-setings.php တွင်ဖန်တီးပြီး PHP ပြောင်းလဲပြီးတန်ဖိုးများကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
ဤအရာအတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဖြေရှင်းမှုများသည်ဝင်ငွေရထားသောအသင်းဝင်များအတွက်ဖြစ်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဤကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်သင်၏အစီအစဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များသည်အလွန်စျေးပေါပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင် demo account ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်၊ အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များစွာကိုပိတ်ထားသည်။ စစ်မှန်သောအကောင့်များဖြင့်ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဤစာသည်သင်၏အကောင့်သက်တမ်းကုန်သွားပြီဟုသတိပေးရန်ပုံပေါ်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်လက်အသုံးပြုရန်သက်တမ်းတိုးပါ။
site နှင့် store အတွက်သီးခြားအစီအစဉ်များပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဒီအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် site သို့မဟုတ် store အတွက်သီးခြားစီအစီအစဉ်မရှိပါ